फ्राईडे रिलिज : हलमा “आप्पा” र “किर्तिपुर”FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फ्राईडे रिलिज : हलमा “आप्पा” र “किर्तिपुर”
फिल्मी फण्डा । आज शुक्रबारबाट हलहरुमा दुई फिल्म एकसाथ प्रर्दशनमा आएको छ । आजबाट फिल्म “आप्पा” र “किर्तिपुर” प्रर्दशनमा आएको हो । दुई फरक जनराका फिल्म ‘आप्पा’ लाई अनमोल गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् भने ‘किर्तिपुर’ लाई प्रदीप खड्कीले निर्देशन गरेका हुन् ।
बाबु छोराको सम्बन्धको कथामा निर्माण भएको फिल्म ‘आप्पा’ मा दयाहाङ राई, सिद्धान्त राज तामाङ , अल्लोना काबो लेप्चाका , तुलसी घिमिरे, अरुणा कार्की लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । दयाहाङ राई स्टारर फिल्ममा अनमोल र शैकात देवको संगीत, शैलेन्द्र डी कार्कीको छायांकन र निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ । फिल्ममा रुदेन सादा लेप्चाको लगानी रहेको छ ।फिल्म आप्पा अनमोलको डेब्यु निर्देशकिय फिल्म हो । फिल्ममा निर्देशक अनमोल गुरुङको कथा, अनमोल गुरुङ र उमेश उपमाको पटकथा तथा संवाद रहेको छ । फिल्म अ माउन्टेन स्टोरीज प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको हो ।
फिल्म “किर्तिपुर”द लिजेण्ड अफ किर्तीलक्ष्मी तत्कालिन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरणको दौरान अठारौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा कीर्तिपुरमा गरेको आक्रमण विषयबस्तुमा बनाइएको ऐतिहासिक नेपाली फिल्म हो । “किर्तिपुर”द लिजेण्ड अफ किर्तीलक्ष्मीलाई यूनिभर्सल सर्टिफिकेट दिइएको छ ।‘कीर्तिपुर’ विगत ८ वर्ष देखिको अध्ययन र सम्बन्धित व्यक्तित्वसगको समन्वयमा निर्माण गरिएको फिल्म हो । फिल्ममा एसराज गरच, मदन दास श्रेष्ठ, सुरविर पण्डित, लक्ष्मी गिरी, बिनोद श्रेष्ठ, हिसिला महर्जन, मनीराज लावत, सुशिल राजोपाध्याय, सन्जय शर्मा, सुनिल भट्टराई, सनित शाही, मञ्जु श्रेष्ठ, अन्जना नकर्मी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
फिल्म ‘किर्तिपुर’ द लिजेण्ड अफ किर्तीलक्ष्मी बासु पासा श्रेष्ठको ‘भैरवसिंह’ नामक उपन्यासमा आधारित फिल्म हो । फिल्ममा निर्देशक खड्कीको संवाद रहेको छ । फिल्ममा बिरेन्द्र ताम्राकार, प्रेम खड्गी र अनन्त श्रेष्ठ निर्माताको रुपमा रहेका छन् । फिल्ममा शंकर महर्जन र नविन जोशीको छायाँकन रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : विज्ञापन विधेयकलाई चलचित्र पत्रकारको धन्यवाद, कलाकारको समर्थन
फिल्मी फण्डा । सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानल सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि मंगलबार ३ बजेसम्मका लागि बन्द गरिएको थियो । सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) लागू गर्ने तयारी गरेसँगै इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानल बन्द गरेका हुन् ।
नेपाली र विज्ञापनरहित च्यानलको प्रसारण भने रोकिएको छैन । ऐन संसदमा विचाराधीन छ । ऐनमा राखिएको क्लिनफिड प्रावधानले पार्ने असर देखाउन २४ घण्टा च्यानल बन्द गरिएको र क्लिनफिड लागू हुँदा नेपालको केबल टीभी व्यवसाय धरासयी हुने महासंघले बताउँदै आएको छ । यस ऐनलाई सर्वसाधरण देखि कलाकारहरुले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् । चलचित्र पत्रकार संघले स्वागतयोग्य भन्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
संघद्धारा जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसदमा विचारधिन विज्ञापन विधेयकमा क्लिन फिडको व्यवस्था गर्न लागेको बिषयलाई चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले स्वागत योग्य ठानेको छ । नेपाली कलाकारहरुलाई प्रथामिकता दिएर नेपाली बिज्ञापन प्रणालीमा जाने र नेपाली बिज्ञापन मात्र नेपालमा प्रशारण हुनुपर्ने धारणा विगतका दिनहरुमा यस संघले राख्दै आइरहेको सबैमा सर्वबिदितै छ ।
तसर्थ सदैव यस संघ क्लिन फिडको पक्षमा रहदै आएको छ । क्लिन फिडले नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने र चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, प्राविधिक , गित संगीत क्षेत्रमा लागेका सर्जक लगायत सिङ्गो क्षेत्रलाई नै लाभ हुने संघको विश्वास छ । विज्ञापन विधेयकमा क्लिन फिड व्यवस्था लागु गर्ने प्रतिबद्वता ब्यक्त गरेकोमा संघ सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै संघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुको साथमा रहदै आएको छ ।
कलाकारहरु पनि नयाँ ऐनको बारेमा खुलेर आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्य क्लिन फिड नीति नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिक सहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हित हुनेछ भनेर उल्लेख गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्,– ‘नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा प्रशारण हुने विदेशी विज्ञापन रोक्ने र विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल प्रशारण गर्न नेपाल सरकारले क्लिन फिड योजना लागू गर्न खोजेको छ ।
यसको विरोधमा टेलिभिजन च्यानलका विक्रेताहरुले २४ घन्टा विदेशी च्यानलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । के यो विरोधले हामीलाई केही असर गर्छ ? नेपालमा प्रशारण हुने सबै विदेशी च्यानलहरु विज्ञापन रहित हुनु हाम्रो लागि राम्रो होइन र ? यसले नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिक सहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको हित हुनेछ । एक पटक हैन, पटक पटक सोचौ । नेपाल सरकारको यो हिम्मतिलो निर्णयमा हाम्रो साथ छ । समर्थन छ । जय नेपाली विज्ञापन । नेपाली नेपाली कलाकार । जय नेपाली प्राविधिक ।’
यस्तै, अर्का हाँस्य कलाकार दिपकराज गिरी लेख्छन्,–‘विदेशीलाई हाम्रो देशमा घुम्न बोलाउने हो, यही स्थाई बसोबास गराउने होइन । त्यस्तै विदेशी टेलिभिजनलाई पनि नेपालमा स्वागत गर्नपर्छ । उनीहरुको ब्रान्ड प्रमोशन गर्ने विज्ञापनलाई होइन । राष्ट्रियता, झन्डा बोकेर मात्रै हुँदैन ।’ अघि उनी लेख्छन् –‘हामीले गाउँको मह चाका छोडेर डावर हनी खान थालेको धेरै भो, नेपाली जुत्ता, नेपाली खाना, नेपाली मनोरञ्जनको स्थान अहिले विदेशी ब्रान्डले लिएका छन् । कारण गुणस्तर मात्रै होइन, विदेशी टेलिभिजनमा आउने विज्ञापनको असर पनि हो । अत, सरकारले लिएका क्लिन फिडको निर्णय सहि छ, समर्थन छ ।’
यस्तै, नायिका करिश्मा मानन्धर लेख्छिन् –‘क्लिनफिड स्वागत योग्य । २४ घन्टा मात्रै होइन सकिन्छ भने दिगो हुनुपर्छ । विदेशी च्यानल हेर्न तल्लिन भएका हामीहरुको लागि केही समय अप्ठ्यारो पर्ला । हो, हामीलाई लाइभ विदेशी कार्यक्रम हेर्ने सुबिधाको लत परेको छ । तर, त्यो सुका बचाउँदा रुपियाँ गुमाए भने झै हुन्छ । दुरदर्शिता राख्यो भने यो देशको हितमा हुनेछ । हो, केवल च्यालनहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला । तर, केही नागरिकको फाइदा भन्दा देशको फाइदा सोच्नुपर्छ । यसो
गर्दा हाम्रो देशभित्र बन्ने टेलिभिजन सामाग्री स्तरिय हुनेछन् । हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश सामाग्री विदेशबाट आयातित हुन्छ ती सामाग्रीहरुको विज्ञापन स्वदेशमै निर्माण हुनेछन् । सुन्दा सामान्य लागेपनि यो निर्णयले आर्थिक, सांकृतिक रुपमा पक्कै सकारात्मक असर पार्ने छ ।’ उता अर्का कलाकार जितु नेपालले पनि दीपकराज गिरीको स्टाटस सेयर गर्दै आफ्नो धारणा पनि सोही रहेको जनाएका छन् ।
सरकारले पहिलोपटक २०७३ साउनमा आमसञ्चार नीतिमार्फत क्लिन फिडको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीतिअनुसार नै २०७४ साउन १ देखि यो लागू हुने भनिए पनि टेलिभिजन वितरककै विरोधका कारण त्यति बेला स्थगित भएको थियो । अहिले नेपालमा करिब १५० वटा विदेशी च्यानल प्रसारण भइरहेका छन् । तीमध्ये भारतीय च्यानलको हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत रहेको बताइन्छ ।
भारतीय च्यानलबाहेक अन्य देशका कतिपय च्यानल अहिले विज्ञापनरहित छन् । भारतीय च्यानलमध्ये करिब आधा च्यानल ‘पेड’ छन्, जुन प्रसारणका लागि नेपाली टेलिभिजन वितरकले पैसा तिर्दै आएका छन् । त्यस्ता पेड च्यानलमा विज्ञापन राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनले गरेको हो । त्यसबाहेक कतिपय ‘फ्री टु एयर’ च्यानलहरू पनि नेपालमा प्रसारण भइरहेका छन्, जसको प्रसारण गरेबापत वितरकहरूले पैसा भने तिर्नुपर्ने छैन ।